Yonke into ekufuneka uyazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain | Iindaba zeGajethi
Yonke into ekufuneka uyazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain
UMiguel Hernandez | 09/09/2021 13:07 | Iimuvi kunye nothotho, Ikhaya
HBO Kube kwimarike yokusasaza abanikezeli bemixholo yeaudio ixesha elide, ngakumbi ukubonelela ngeyona franchise inqwenelekayo. Nangona kunjalo, zininzi izizathu ezenza ukuba abasebenzisi babaleke inkonzo eSpain ngenxa yomgangatho ophantsi womfanekiso kunye nokusetyenziswa kwawo okungalunganga, into eya kuthi ekugqibeleni ibe yimbali.
I-HBO yazisa ngokufika eSpain ngenkonzo ye-HBO Max, sikubonisa konke okuqulathiweyo kunye notshintsho ekufuneka uluthathile ingqalelo ukuze uyonwabele le nkonzo. Fumanisa nathi ukuba ungalufumana njani uninzi lwe-HBO Max kwaye wenze uninzi lweqonga ngesikhokelo esichazayo.
1 I-HBO Max kunye nokufika kwakhe eSpain
2 Kuthekani ngokurhuma kwam ngoku kwe-HBO?
3 Utshintsho kunye namaxabiso kwiqonga leHBO Max
4 Iya kuba yintoni ikhathalogu yeHBO Max eSpain?
I-HBO Max kunye nokufika kwakhe eSpain
Inkonzo ye-HBO Max sele isetyenzisiwe kwamanye amazwe afana ne-United States yaseMelika kwaye sele benayo iwebhusayithi yakho eSpain. Njengoko kubhengeziwe yi-HBO uqobo, inkonzo ikunika awona mabali mabalaseleyo IWarner Bros., I-HBO, iMax Originals, i-DC Comics, i-Cartoon Network kunye nokunye okuninzi, kunye okokuqala ngqa (ubuncinci eSpain). Into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo ibangele ukuthandabuza phakathi kwabanye abasebenzisi, kodwa ungakhathazeki, kuba size kusombulula onke amathandabuzo anokuvela.
Zilungiselele ukuthandana neqonga elitsha lokusasaza eliya kuhlala eSpain nge-26 ka-Okthobha #MholweniHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
-HBO Spain (@HBO_ES) Septemba 8, 2021
Into yokuqala kukucaca ukuba kubume be-26 ezayo ka-Okthobha uya kuba nakho ukonwabela zombini i-HBO esemgangathweni Njengayo yonke imveliso yeWarnerMedia kunye nokwazisa ngeqonga elinye ngaphandle kokufumana ikhontrakthi ngeenkonzo ezahlukeneyo ngababoneleli bethelevishini bekhebula abanjengoMovistar, phakathi kwabanye.
Kwangelo xesha, i-HBO Max izakufika eSpain, eSweden, eDenmark, eNorway, eFinland naseAndorra kule Okthobha 26. Emva kwexesha, ulwandiso luya kuqhubeka ePortugal, phakathi kwamanye amazwe, nangona loo mihla ingekaqinisekiswa.
Kuthekani ngokurhuma kwam ngoku kwe-HBO?
Ngamafutshane, akukho nto izakwenzeka. I-HBO iya kubonelela ngomhla obekiweyo wokuziqhelanisa, kodwa ubukhulu becala into abaya kuyenza kukunyamalala kweqonga lemveli le-HBO, uninzi lwabo ngokuqinisekileyo oluya kuphulukana nalo ngovuyo, kwaye idatha iya kudityaniswa ngokuzenzekelayo I-HBO Max. Oku kuthetha ukuba:
Uyakwazi ukungena kwi-HBO Max ngeempawu zakho ze-HBO (abasebenzisi kunye neepassword)
Idatha iya kugcinwa, igcinwe kwaye imixholo iya kuphinda iveliswe apho ubashiye khona
Ngamafutshane, kwango-Okthobha u-26 iakhawunti yakho ye-HBO iya kuguqulwa ngokuzenzekelayo ibe yi-akhawunti ye-HBO Max Kwaye uya kuba nakho ukonwabela wonke umxholo onikwa liqonga elitsha.
Utshintsho kunye namaxabiso kwiqonga leHBO Max
I-HBO ayiqinisekisanga ukuba kuya kubakho iyantlukwano kwixabiso elibizelwe abasebenzisi, enyanisweni, xa inkonzo ihanjisiwe I-HBO ukuya kwi-HBO Max e-United States of America nakwi-LATAM khange kubekho kunyuka kwamaxabiso.
Ngapha koko, kuthathelwa ingqalelo into yokuba i-HBO sele iqinisekisile ukuba ukuhanjiswa kweeakhawunti kunye nolwazi luya kuzenzekela ngokupheleleyo, Yonke into ibonisa ukuba kuya kubakho umahluko kwimirhumo. Kwakhona, ukuba usebenzisa i-HBO ngokunikezelwa yinkampani yakho yefowuni okanye umboneleli ngeenkonzo ze-Intanethi, akukho nto iya kutshintsha kuba iziqinisekiso zakho ziya kudlula zisuka kwelinye iqonga ziye kwelinye.
Iya kuba yintoni ikhathalogu yeHBO Max eSpain?
Njengoko sele usazi, i-HBO yinxalenye yeWarner, ke ngoko, siya kuba nakho ukonwabela le khathalogu yeHBO ukongeza Inethiwekhi yeKhathuni, i-TBS, i-TNT, iSymym yabantu abadala, i-CW, i-DC iphela kunye iifilimu yenkampani kunye neenkampani zayo ezinxulumene nemveliso ezinje ngeNew Line Cinema. Ngaphandle kwamathandabuzo, ikhathalogu iya kukhula ngobukhulu kunye nomgangatho:
Ezona blockbusters zikhulu, awona mabali aqhekezayo, kunye nezakudala ezingalibalekiyo ezisenzileyo sangobani. Yonke into ekwiHBO Max.
I-DC iphela iiFranchise
Ukukhutshwa kutshanje kweWarner: IJam yasemajukujukwini: Amabali amatsha
Ukongeza, banoluhlu lwamalungelo afana nabahlobo, iTheory enkulu yeBang Bang okanye iSouth Park yokuphucula kakhulu ikhathalogu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iimuvi kunye nothotho » Yonke into ekufuneka uyazi ngokufika kwe-HBO Max eSpain
Kuphi ukubukela umdlalo ngeli xesha lonyaka?
I-RoboVac X80 kunye ne-HomeVac H30, ukubheja kweminqweno emitsha evela eufy